IATA waxay ugu baaqeysaa dowladaha inay iskaashi la yeeshaan warshadaha gaadiidka cirka qorshayaasha dib u bilaabista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » IATA waxay ugu baaqeysaa dowladaha inay iskaashi la yeeshaan warshadaha gaadiidka cirka qorshayaasha dib u bilaabista
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Alexandre de Juniac, Agaasimaha Guud iyo Agaasimaha Guud ee IATA
Marka dawladuhu ay u soo jeestaan ​​dib-u-soo-celinta isku-xirnaanta hawada adduunka, IATA waxay diyaar u tahay inay la-hawlgasho iyaga si loo fududeeyo hab caalami ah oo joogto ah, hufan oo wax ku ool ah
Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ugu yeeray dowladaha inay iskaashi la yeeshaan warshadaha gaadiidka cirka si loo dajiyo qorshayaal si nabadgelyo leh dib loogu xirayo dadka, ganacsatada iyo dhaqaalaha marka la oggol yahay xaaladda cudurrada faafa ee COVID-19. Mudnaanta koowaad ee iskaashigan xasaasiga ah waa dardargelinta dejinta heerarka caalamiga ah ee tallaalka iyo shahaadada baaritaanka.
Waxaan arki karnaa nalka dhamaadka tunnelka markii barnaamijyada talaalka ay socdaan. U rogista aragtidan dib-u-bilow ammaan ah oo nidaamsan waxay u baahan tahay qorshe taxaddar leh iyo isuduwid ay yeeshaan dowladaha iyo warshadaha. Tani waxay noqon doontaa mid dhib badan maadaama mudnaanta toddobaadyada iyo bilaha soo socda ay ka koobnaan doonaan faafitaanka noocyo cusub. Laakiin xitaa iyadoo dhibaatadu sii xumaaneyso, waxaa muhiim ah in la diyaariyo wadada dib loogu bilaabi karo duulimaadyada marka ay cudurrada faafa faafayaan. Fahmida jaangooyooyinka siyaasadeed ee dowladda iyo oggolaanshaha heerarka caalamiga ah ee loo baahan yahay si loo taageero soo noqoshada caadiga ee safarka ayaa xaqiijin doonta in gaadiidka cirka si wanaagsan loo diyaariyey oo uusan noqonin vector macno leh u soo celinta. Diyaaradaha waxay diyaar u yihiin inay dowladaha ka taageeraan howshan, ”ayuu yiri Alexandre de Juniac, IATAAgaasimaha guud iyo agaasimaha guud.
Marka dawladuhu ay u soo jeestaan ​​dib-u-soo-celinta isku-xirnaanta hawada adduunka, IATA waxay diyaar u tahay inay la-hawlgasho iyaga si loo fududeeyo hab caalami ah oo joogto ah, hufan oo wax ku ool ah. Horeba waxaan u arki karnaa dawladaha qaarkood inay horumariyaan mabaadi'da barnaamijyadooda tijaabinta / tallaalka kuwaas oo aasaas u noqon kara iswaafajinta adduunka. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Tallaalka: Dowladaha badankood waxay raadinayaan istiraatiijiyad tallaal oo ay ku doonayaan inay ku ilaashadaan shaqaalahooda daryeelka caafimaadka iyo dadka ugu nugul marka hore. IATA waxay taageertaa dib u furida xuduudaha si loo safro marka tan la gaaro, maadaama khataraha ugu badan la yareyn doono.
Shakhsiyaadka la tallaalay: Dowladda Griiga ayaa usbuucii la soo dhaafay soo jeedisay in shaqsiyaadka la tallaalay si deg deg ah looga dhaafo xayiraadaha safarka, oo ay ku jiraan karantiillada. IATA waxay taageertaa dhaq dhaqaaqyada dowladaha, oo ay kujiraan Poland, Latvia, Lebanon iyo Seychelles, si loo hirgaliyo ka cafintaan.
Imtixaanka: Dowlado badan ayaa hirgeliya nidaamyada tijaabinta si loo fududeeyo safarka, oo ay IATA taageerto. Jarmalka iyo Mareykanka, tusaale ahaan, waxay ka faa'iideysanayaan horumarka degdegga ah ee tiknoolajiyada baaritaanka si ay u aqbalaan PCR iyo baaritaanka antigen si ay si ammaan ah u maareeyaan halista safarka. In kasta oo tijaabooyinka degdega ah ee loo yaqaan 'antigen' la doorbidayo xawaaraha iyo qiimaha faa'iidooyinkooda, haddana waxaa iska cad in baaritaanka PCR uu door ka ciyaari doono maaddaama dowlado badani ay u baahan yihiin tijaabooyin daaqad u dhexeysa 48- illaa 72 saacadood ka hor safarka.
Crew: Tilmaanta ICAO-CART waxay ku talineysaa in shaqaalaha laga dhaafo howlaha tijaabada iyo xaddidaadaha loogu talagalay rakaabka. IATA waxay taageertaa hab maamuuska maareynta caafimaadka shaqaalaha kuwaas oo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, baaritaan joogto ah iyo hubinta caafimaadka ee saldhigyada guryaha, oo ay weheliso tilmaamo adag oo xaddidaya isdhexgalka bulshada deegaanka inta lagu jiro shaqa joojinta shaqaalaha. Tani waxay awood u siineysaa shirkadaha duulimaadyada inay maareeyaan halista COVID-19 iyadoo la ilaalinayo jiritaanka howlgalka.
Tallaabooyin badbaado-biyood oo isku-dhafan oo badan: Talooyinka ICAO ee talaabooyinka badqabka bio-badbaadada ee lakabyada kala duwan leh (oo ay ku jiraan maaskaro-xidhashada) ayaa si caalami ah looga hirgaliyay. IATA waxay taageertaa talaabooyinka noocan oo kale ah oo si buuxda ugu sii jira dhammaan safarleyda illaa iyo inta ay cudurka faafa u oggolaanayo nasasho.
“Waxaa jira qaybo badan oo dhaqaaqaya isla'egta. Tirada dadka la tallaalay, iyo helitaanka baaritaanka ayaa muhiim u ah iyaga. Shirkadaha Duulimaadyada waxay la jaanqaadeen howlahooda si ay u ilaaliyaan howlaha xamuulka iyo adeegyada qaar ee rakaabka, iyagoo u hoggaansamaya xayiraadaha tirada badan iyo kuwa aan isuduweysneyn ee lagu soo rogay Iyagoo ka duulaya khibraddan ayay ka caawin karaan dawladaha diyaarinta ay ugu dambayntii si nabadgelyo leh dib ugu soo celinayaan isku xirnaanta adduunka ee dadkooda, ganacsiyada iyo dhaqaalaha, ”ayuu yiri de Juniac.
Ku-dhaqanka: Heerarka Caalamiga ah waa Muhiim:
Iyada oo salka ku haysa xaalad kasta oo dib loogu yagleelayo isku xirnaanta hawada ayaa ah horumarinta heerarka caalamiga ah si shuruudaha hal dal ay u raaci karaan socdaalka asal ahaan ka soo jeeda maamullada kale. Heerarka muhiimka ah ee caalamiga ah ee la soo saaray waxaa ka mid ah:
Shahaadooyinka tallaalka: WHO ayaa hogaamineysa dadaallada lagu dhisayo heerarka loo baahan yahay in si dijitaal ah loo duubo macluumaadka tallaalka oo muhiim u noqon doona dib-u-dhiska safarka caalamiga ah. Shahaadada Tallaalka Smart waxay noqon doontaa beddelka dhijitaalka ah ee "buug huruud ah" oo muddo dheer la aasaasay oo loo isticmaalay in lagu maareeyo tallaallada sida qandhada hurdiga ah.
Qaabka guud ee imtixaanka: OECD waxay aasaas u tahay qaab-dhismeed caalami ah oo ka caawiya dawladaha inay ku kalsoonaadaan xogta baaritaanka iyada oo ku saleysan aqoonsiga wadajirka ah ee natiijooyinka baaritaanka. Degdegga qaabdhismeedka noocan ah waxaa lagu muujiyey hakadkii dhowaan ku yimid duulimaadyadii u dhexeeyey Imaaraatka iyo Danmark sababo la xiriira walaaca laga qabo nidaamka imtixaanka Imaaraatka. Qaab dhismeed lagu kalsoon yahay ayaa hubin doona in socdaalka aan lagu qaban dhexda marka aysan dowladuhu aqoonsanayn midkoodna nidaamyada tijaabinta midba midka kale. Jaangoynta shahaadooyinka imtixaanka ku habboon sidoo kale waa lagama maarmaan.
Aqoonsiga Safarka Dijital ah (DTC): ICAO waxay daabacday jaangooyooyin lagu abuurayo 'DTC' ePassports. Iyada oo ay weheliso awood u siinta safarka aan xiriirka lahayn sida ay ku talisay tilmaamaha ICAO-CART, aqoonsigu waa qayb muhiim ah oo ka kooban kumbuyuutar socotada ah tallaalkooda iyo shahaadooyinka baaritaanka. Halbeegga ayaa jira caqabadda hadda jirtana waa hirgelinta.
“Sidaan aragnay, go’aannada dowladda ee keli ah waxay wax ku ool u yihiin joojinta dhaqdhaqaaqa adduunka. Dib-u-dejinta xorriyadda safarka, hase yeeshe, waxaa lagu sameyn karaa oo keliya iskaashi. Dowladuhu waxay durbaba arkeen sida ay taasi caqabad ku noqon doonto iyada oo aan la helin heerarka caalamiga ee tallaalada ama baaritaannada. Tani waxay toosh ku ifineysaa sida deg degga ah ee shaqada muhiimka ah ee ay qabanayaan WHO, OECD iyo ICAO. IATA waxay ka qaybqaadanaysaa dadaalladaan waxayna diyaar u tahay inay dowladaha ka caawiso hirgelinta, ”ayuu yiri de Juniac.
Mustaqbalka ku dhisida IATA Travel Pass
IATA waxay dhiseysaa kaabayaasha macluumaadka si amaan ah dib loogu bilaabo safarka IATA Travel Pass. IATA Travel Pass waa xalka warshadaha kaas oo ka caawin doona dowladaha, shirkadaha duulimaadka iyo shaqsiyaadka safarka ah maareynta talaalka ama shuruudaha imtixaanka macluumaad sax ah, aqoonsi sugan iyo xog la xaqiijiyay. Maaddaama ay tahay xalka ay taageerto wershadaha, waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah, ilaaliya asturnaanta iyo ixtiraamka heerarka caalamiga ah.
Barnaamijkii ugu horreeyay ee tijaabo ah ee lagu tijaabiyo barnaamijka xaaladda safarka dhabta ah wuxuu ka bilaabmay Singapore Airlines bishii Diseembar 2020. Liisaska sii kordhaya ee shirkadaha duulimaadyada ayaa xaqiijinaya ujeedkooda ah inay adeegsadaan IATA Travel Pass, oo ay ku jiraan IAG, Emirates, Etihad Airways iyo Qatar Airways.
“Iyada oo ku saleysan khibradeena qotoda dheer ee wadista isbedelka isbeddelka ee gaadiidka hawada adduunka, waxaan aaminsanahay in IATA Travel Pass ay siin doonto taageerada ugu fiican dawladaha maareynta tallaalka iyo baaritaanka xogta si ammaan ah loogu fududeeyo safarka. Laakiin ku guuleysiga mid kasta oo ka mid ah xalalka la soo saarayo waxay ku xirnaan doontaa dowladaha la shaqeeya iyo is aaminka. Gaadiidka cirka ayaa sumcaddiisa ku dhisay nabadgelyada iyadoo la kaashanaysa dawladaha si loo hubiyo in si guud loo hirgeliyo heerarka caalamiga ah ee hufan. Taasi waa tusaale ku dayasho mudan sida ay warshadaha iyo dowladaha uga wada shaqeyn karaan dib-u-xiriirinta adduunka iyadoo la adeegsanayo fursadaha abuuray tijaabada iyo horumarka tallaalka, ”ayuu yiri de Juniac.